Judo-Afrika: hentitra amin’ny fitandroana fahasalamana ny fanjakana | NewsMada
Judo-Afrika: hentitra amin’ny fitandroana fahasalamana ny fanjakana
Nampahafantarina ary nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia lasa teo, ny fandraisan’i Madagasikara ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika, sokajy “seniors”, taranja judo, ny 17 hatramin’ny 20 desambra izao.
Hentitra amin’ny fitandroana fahasalamana ny fitondram-panjakana sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Araka ny tapaka nandritra io filankevitry ny minisitra io, tsy maintsy avokoa mandalo fitsirihana ara-pahasalamana sy manatanteraka fitiliana PCR ireo mpandray anjara sy ny “staff” rehetra, mialoha ny hidirana eto Madagasikara. Harindra, araka izany, ihany koa ny fitaterana ireo atleta vahiny ho avy eto. Tapaka ihany koa fa tsy azo atrehin’ny rehetra ny fifaninanana, izany hoe, “à huis clos”. Ankoatra izay, mijanona any amin’ny fitoerana fitobiana ny mpanao fanatanjahantena tsy mifaninana fa tsy mahazo mankeny amin’ny toerana hanaovana ny fifaninanana. Hajaina hatrany ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana ivelan’ny toerana hifaninanana, toy ny fanaovana arovava.
Tsiahivina fa sambany ny handray fifaninanana afrikanina toy izao i Madagasikara ary nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy ny judo fa voninahitra lehibe ho antsika ny fandraisana ity lalao ity. Raha ny fantatra, ny sokajy “cadets”, ny “juniors” sy ny “seniors” mihitsy ny saika hatao teto, saingy noho ny antony ara-pahasalamana izay tsy azo anoharana, nofoanana ny “cadets” sy ny “juniors”. Efa vonona amin’ny fandraisana ny sokajy “seniors” ny federasiona ary efa voadinika avokoa ny pitsompitsony rehetra. Fanamby lehibe apetraka ny hahatanterahan’ity fifaninanana ity antsakany sy andavany eto amintsika.
Eo amin’ny fanomanantena kosa, efa nanomboka ny fampivondronana ny atleta malagasy, eny amin’ny M Hotel Ampefiloha.